စမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator
စမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး စမတ် rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော သို့ ဖြစ် တည်ရှိသည် တွင် သေးငယ်သော နေရာများ နှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, damper နှင့် auသို့mation ၏ rotary machတွင်es.AOX's တွင်novative ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းs တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ လက်ခံရရှိ အလွန် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ AOX-R ကို ကို စီးရီး စမတ် rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ စိတ်ချရသော, လုံခွုံသော နှင့် အဆင်ပြေ, နှင့် အဆိုပါ အားသာချက်များ ၏ compatibility နှင့် practicability.Which ကျွန်တော်တို့ နိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ တွင် အဆိုပါ အနား အနာဂတ်။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ၏ shell ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. တိုက်နယ်: AOX-R ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator ၏ထိန်းချုပ်ခြင်း circuit ကို Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံနှင့်တွေ့ဆုံ circuit ကို layout ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်, ဆိပ်ကမ်းကိုထိရောက်စွာအပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်း။
AOX-R ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator များ၏ထိန်းချုပ်မှုလိုင်း Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာနှင့်မျဉ်း layout ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
စျေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသော inquiey အဆိုအရကျနော်တို့လေးပုံတစ်ပုံ-အလှည့်ထုတ်ကုန်များဆက်တိုက်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း control.The လေးပုံတစ်ပုံ-အလှည့်ထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်သမားရိုးကျစီးရီး (AOX-R ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator) နှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားစီးရီးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများသို့ခွဲခြားထားပါသည်ဆို့ရှင်အရည်၏လယ်ပြင်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တည်ငြိမ်ရေးစွမ်းဆောင်မှုများကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံးစီးရီး ON-OFF, Module နှင့်အသိဉာဏ်ထုတ်ကုန်များကရေးစပ်နေကြသည်။ မျိုးစုံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းများ၏အကျိုးကိုဆည်းပူးနေစဉ်နှစ်တွေကပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်အလေ့အကျင့်များနှင့်လျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးလယ်ကွင်းကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ပြည်တွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးထုတ်ကုန်တန်ဖိုးထား, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား, AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-R ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-R ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးစမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: စမတ် rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်